Ogige igwe, Onye na-ekpo ọkụ ọkụ, Onye na-ahụ maka nchara anyanwụ, PWM Njikwa, China ndị na-emepụta ma na-enye
BANYERE Kpọtụrụ onye na- nzaghachi
Mgbanwe nke Sine Wave Inverter
PWM Njikwa Ọchịchị Anyanwụ
Ọcha Sine Wave Inverter
Onye na-ahụ maka ncha ihu igwe
Ụlọ Nlekọta Igwe
Usoro ncha ọkụ
Ndụmọdụ Maka Ihe
Ngwaahịa optoelectronic green
Ala ala, nchebe gburugburu ebe obibi, nchekwa ikike.
Longchi - Ịhụnanya Afrika
N'abalị, na-eji akwụkwọ ọgụgụ ọkụ na-agụ akwụkwọ ọkụ
oghere ndị dị na mbara igwe maka iji ụlọ mee ihe
ndị na-arụ ọrụ na mbara igwe
ihe mkpuchi ike anyanwụ
ike anyanwụ maka ụlọ
ike n'ụlọ anyanwụ
usoro ulo igwe
Zhejiang Longchi Technology Co., Ltd. bụ nchịkọta nke mmepe ngwaahịa, mmepụta, Ahịa na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ume ọhụrụ. Ụlọ ọrụ na-arụpụta mmezi nke ọma, àgwà ngwaahịa na nkwụsi ike, agafewo ISO9001 njikwa nchịkwa njikwa, ihe ndị bụ isi site na nlekọta nlekọta mma nke SGS, CE akwụkwọ ikike, akụkọ ROHS ma nweta akwụkwọ dị mkpa.
Osisi ahụ na-ekpuchi ebe mita 56667, ebe a na-ewu ụlọ mita 55935, ya na aha RMB 20million nwere aha.
Ngwa ndị bụ isi bụ PV modulu, usoro mgbasa ozi anyanwụ, 80% nke ngwaahịa ndị a na-ebupụ na Africa Europe, North America, Australia. Middle East, n'Ebe Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, nke ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ na-eto, bụ n'ezie "ala nchekwa nchekwa gburugburu ebe obibi na-echebe ihe ọkụkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ." Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ndị nkesa ma n'ụlọ ma ná mba ọzọ, merie ọtụtụ n'ime ndị ahịa na otuto. dị njikere ije ozi nke mbụ na ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi na-esi n'aka na-enye aka ịmepụta "anwụ" ndụ. GỤKWUO
Anyị na-enye ndị ahịa sitere n'akụkụ ụwa niile ezigbo nkwurịta okwu na ọrụ nkwado ngwaahịa.
Nkwado anyị na ogologo oge na-arụ ọrụ na netwọk nke ụlọ ọrụ ụwa na ụlọ ọrụ na-egosipụta, nwere ike hụ na ngwaahịa na-eweta n'oge kachasị dị mkpirikpi.
Nkwado na-enye aka
Iji mee ngwa ngwa, na-akwụghachi ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ ọrụ, iji gboo mkpa nke ndị ọrụ anyị.
Anyị na-enyere aka karịa ndị 3,000 ahịa zuru ụwa ọnụ-karịa 30% nke ndị na-ere ahịa ahịa ụwa n'ụwa ebe ha na-azụ ahịa ma gbanwee mmekọrịta mmadụ na ibe ha n'ime mkpebi nlekota ego.
Ike anyanwụ na-eme ka ìhè na ọkụ si na Sun na-achịkwa iji ọrụ dịgasị iche iche dị ka kpakpando kpakpando, fotovoltaics, ike okpomọkụ nke kpakpando, mmepụta kpakpando, ikike ọkụ nnu mmiri na kemikal artificial ... GỤKWUO
Ogologo oge ole ka ogwe ọkụ dị
Afọ 25 (ma ọ bụ karịa). nke a nwere ike ịbụ ihe nkasi obi nkịtị sitere n'aka ndị na-eme Tier. N'ezie, kpakpando kpakpando ga-adịru ogologo karịa nke ahụ: nkwenye ahụ na-emekarị ka ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ n'elu asatọ nke ọrụ ike ha mgbe afọ iri abụọ na ise. Nyocha nke NREL na-egosi na ọtụtụ akụkụ ka mmanụ ... + Gụkwuo ya
Ego ole ka m na-achọ maka ụlọ m?
Ịchọpụta oke nke ike ike anyanwụ gị malitere site na ajụjụ dị mfe: ọnụ ọgụgụ kpakpando nọmba ọ dị m mkpa? Dika ndi mmadu n'ozuzu ha choro iziputa ume zuru ezu iji kpochapu uzo eletrik ha, ihe mbu bu ichoputa ihe ndi mmadu nwere ike igbanye ike iji mezuo ihe ndi ozo ... + Gụkwuo ya
Kedu ka Panel na-arụ ọrụ?
Na-arụ ọrụ dịka ume ike maka ọtụtụ afọ, kpakpando kpakpando okpukpu okpuru na ihe ngosi ihu, ma kwadoro na-eme ka ọ dị mma. Otú ọ dị, olee otú kpakpando na-arụ ọrụ? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọrụ dị iche iche nke anyanwụ na-arụ ọrụ site n'inye photons, ma ọ bụ ahụ nke anwụ na-acha, iji kpoo electrons n'efu site na mkpụrụ, na-emepụta ọkụ eletrik. ... + Gụkwuo ya
Tinye.: NO.20 Guodao North Road, Shangqiang Industrial Area, Daixi Town, Wuxing district, Huzhou City, Zhejiang Province.
Copyright © 2019 Zchijiang Longchi Technology Ikike niile echekwabara.
FAQ | Enyemaka | amụma nzuzo | okwu